Dibadbaxyo waa weyn oo ka socda waddanka Kuuriyada Koonfureed – The Voice of Northeastern Kenya
Dibadbaxyo waa weyn oo ka socda waddanka Kuuriyada Koonfureed
Waxa dibadbaxyo waa weyn oo ay isugu soo baxeen boqolaal kun oo qof oo lagu dalbanaayo in lagu xiro madaxweynaha Kuuriyada koonfureed ayaa laga soo tabinaaya in ay ka socdaan magaalada Seoul ee ah magaala madaxda waddankaas.
Dibad baxyadaan ayaa maanta lugaha la galay isbuuca 8-aad oo ay si toos ah u socdaan waxana ay ka dambeeyen kadib marki ay soo shaac baxday fadeexad ka dhan ah haweeney saaxibad dhow la ahayd madaxweynaha waddankaas Park Geun Hye.
Dibadbaxyadan ayaa yimid wax yar uun kadib marki maalinta shalay ahayd ay mucaaradka dalkaas ay mooshin xilka looga xayuubinaayo haweeneyda madaxda ka ah dalkaas ay horkeenen aqal sharci dajiyaasha.
Dadka boqolaal kun ah ee maanta dibad baxaayay ayaa waxa ay ku dhawaaqaayen ereyo ay kamid yihiin in haweeneyda 64 sano jirka ah ay wajahdo sharciga dalkaas u yaalo waxana qaar kamid ah boorarka dadkaas ay siteen ka muqday haweeneydan oo xiran dharka maxaabiista iyadoo ay ku xir xiran yihiin xargo.
← Madaxweynaha Faransiiska François Hollande oo an doorashada sanada 2017-ka u tartami doonin
Arday shil ku gashay wadada isku xirta magaalooyinka Iten iyo Kabarnet →